ध्रुवचन्द्र गौतमको सम्झनामा सात साहित्यकार ⋆ JINDAGANI.COM
Home » ध्रुवचन्द्र गौतमको सम्झनामा सात साहित्यकार
असार ३, २०७८	1	By कला अनुरागी
चार दर्जनभन्दा बढी आख्यानकृति लेखिसकेका आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमले अघिल्लो पुस्ताका धेरै साहित्यकारको संगत गर्ने मौका पाए । धेरै साहित्यकारसँग उनले बसउठ गर्ने मौका पाए, केहीसँग कम हिमचिम भए पनि राम्ररी जान्नेबुझ्ने मौका पाए । त्यस्तै, कतिसँगचाहिँ गुरु–शिष्यको सम्बन्ध थियो । त्यसमध्येका केही साहित्यकारलाई उनी यसरी सम्झन्छन्:
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मैले देख्ने र सुन्ने अवसर पाएँ । उहाँलाई मैले ०१४ सालमा पहिलोपटक वीरगञ्जमै देखेको हुँ । हामी पढ्ने त्रिजुद्ध स्कुलमा उहाँको सम्मानमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौं । उहाँ त्यहाँ जानुभएको थियो ।
त्यसबेला उहाँ रुस घुमेर आउनुभएको थियो । उहाँले रुसको विश्वविद्यालयको वर्णन गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘हामीले एक–एक कोठा चियाएर हे¥यौं भने पनि जीवनले भ्याइँदैन होला ।’ त्यस्तै त होला नहोला, तर उहाँ प्रभावित हुनुभएको भने देखिन्थ्यो ।
त्यहाँ देवकोटासँग कुरा गर्दा एक विद्धान प्राध्यापकले भनेका थिए–‘दियर इज अ थिन लाइन बिट्विन लुन्याटिक एण्ड द पोएट (एउटा पागल र कविबीच सानोमात्रै सीमारेखा हुन्छ) ।’
त्यसको जवाफमा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मान्छु, पागल त सबै पागलै हुन्छन् । तर कवि चाहिँ काम लाग्ने पागल हो, अरू चाहिँ बेकम्मा पागल ।’ त्यसो भन्दा उहाँको ‘सेन्स अफ ह्युमर’ पनि देखिएको थियो ।
मैले त देवकोटा दारी पालेको बुढो हुनुहोला भन्ने ठानेको थिएँ, तर उहाँ त सफाचट र भव्य व्यक्तित्वयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँमा सरलता पनि निकै देखिन्थ्यो । कार्यक्रममा तपाईंलाई मन पर्ने कविता पढ्न अनुरोध गर्दा लेखनाथ पौडेलको ‘पिंजडाको सुगा’ पो पढ्न थाल्नुभयो । त्यसपछि उहाँकै मन पर्ने कविता पढ्न भनियो । त्यसपछि उहाँकै आवाजमा ‘पागल’ र ‘गोली यो’ भन्ने कविता सुन्ने अवसर पाइयो ।
देवकोटा जीवित हुँदै ‘लेजेन्ड’ बनिसकेका थिए । उनका बारेमा विभिन्न कथा बनेका थिए । कतिपय राम्रा र कतिपय नराम्रा । कतिले उहाँलाई ‘महागरिव’ पनि भन्थे । तर गरिवचाहिँ होइन, खर्चालु चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने समकालीनबाट थाहा पाइयो ।
पछिल्लो पटक मैले उहाँलाई आर्यघाटमा देखेँ ०१६ सालमा । त्यसबेला वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आइसकेको थिएँ । उहाँ अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई भेट्न जानेको लाममा म पनि थिएँ । मैले मानिसलाई त्यसरी लाम लागेर श्रद्धा व्यक्त गरेको पहिले देखेको थिइनँ । त्यहाँ ‘रगत दिन्छु’ भन्नेको पनि तँछाडमछाड नै थियो ।
त्यसबेला उहाँको शरीर जीर्ण भइसकेको थियो । बोल्न पनि सक्नुभएको थिएन । कञ्चट धस्सिएको थियो । तर आश्चर्य, मैले त्यस्तो देखेर आएको मानिसले हिन्दी र अंग्रेजीमा एउटा–एउटा कविता लेख्नुभएछ । ‘आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण एक’ भन्ने कविता पनि त्यसैबेला लेख्नुभएको थियो । त्यो उहाँको कविताप्रतिको समर्पणको पनि चरमसीमा थियो ।
काठमाडौँ आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमए पढ्न थालियो । त्यसैबेला गुरुको रूपमा नाटककार बालकृष्ण समलाई भेटियो । उहाँ निकै बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो ।
गुरु–शिष्यको रूपमा हाम्रो निकै बसउठ भयो । उहाँ आफ्नो नाटक ‘प्रल्हाद’ पढाउनुहुन्थ्यो, ‘नियमित आकस्मिता’बारे प्रवचन पनि दिनुहुन्थ्यो । हप्ताको एकदिन कक्षा हुन्थ्यो । त्यस क्रममा उहाँले, कवि र गद्य लेखकको भेदबारे पनि बताउनुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो, ‘कविले तत्कालिक प्रतिक्रिया दिन्छ । फूल देख्यो भने त्यसको सौन्दर्यबाट प्रभावित भए कविता लेखिहाल्छ । तर नाटककार चाहिँ त्यस्तो होइन ।’
उहाँले आफ्नो नाटक ‘प्रल्हाद’मा अध्यात्म र भौतिकवादको द्वन्द्वलाई चित्रण गरेको बताउनुहुन्थ्यो । ईश्वर छैन भन्ने उहाँको विचार थियो । कक्षामा पनि भन्नुहुन्थ्यो, ‘हाम्रो संस्कृति मलमूत्रको संस्कृति हो । गोबर भनेको मल नै हो । गहुँत भनेको मूत्र नै हो ।’
तर पछि उहाँले ‘खं ब्रम्ह’ भन्ने धार्मिक धारणालाई मान्न थाल्नुभयो भन्ने सुनियो । त्यस बिषयमा मैले भने सोध्न पाइनँ । उहाँसँग कलेजभन्दाबाहेक विभिन्न पिकनिकमा पनि भेट भयो । पछि मैले कलाकार पत्रिकाका लागि घरमै गएर अन्तरवार्ता पनि लिएँ ।
बदरीनाथ भट्टराईको कथा हामीले स्कुलकै पाठ्यक्रममा पढ्नुपथ्र्यो । उहाँको लेखनमा भेटिने राष्ट्रिय भावनाले हामीलाई निकै प्रभावित पारेको थियो । ‘विदेशको बासी स्याउ भन्दा स्वदेशको ताजा नासपाती मीठो हुन्छ’ भन्ने वाक्य त कण्ठ नै थियो ।
उहाँ पनि विश्वविद्यालयका गुरू हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले गुरू–शिष्यकै रूपमा संगत भयो । उहाँ देवकोटाबाट निकै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । कतिपय सन्दर्भमा देवकोटासँग भएको कुरा हामीसँग पनि भन्नुहुन्थ्यो ।
उहाँ निकै सरल हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले नजिक हुन सजिलो भयो । तर गुरू भएका कारण आदर गरिन्थ्यो । उहाँ र हामीबीच त्यही आदरको दूरी थियो ।
साहित्यकार भवानी भिक्षुसँग चाहिँ निकै नजिक भएर संगत गर्ने मौका पाइयो । उहाँ हामीलाई घरमा बोलाइरहनुहुन्थ्यो । खान पकाउन निकै सौखिन हुनुहुन्थ्यो र मीठो बनाउनुहुन्थ्यो । मासु, पकौडीजस्ता परिकार आफैंले पकाएर हामीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो । उहाँबाहेक अरू साहित्यकारले आफैंले पकाएर खुवाएको मलाई थाहा छैन । कसैले पकाए पनि मैले देख्ने गरी चाहिँ पकाएका छैनन् । उहाँले मदिरा पिएको भने देखिएन । पिएको भएपनि उहासँग बसेर पिउने मौका मिलेन । त्यही भएर थाहा पाइएन ।
भवानी भिक्षुको कथा ‘त्यो फेरि फर्केला’बाट म धेरै प्रभावित थिएँ । त्यसले पनि उहाँसग भेट्न निकै उत्सुक थिएँ । काठमाडौ आएपछि त्यो सम्भव भयो ।
म चावहिल बस्थेँ, उहा बत्तीसपुतली बस्नुहुन्थ्यो । त्यसैले भेटघाट गर्ने अवसर प्रशस्तै पाइयो । उहाँसँग पहिलोपटक कहाँ भेट भयो भन्ने चाहिं सम्झना छैन । जोसँग नजिक भइन्छ, उसँग कहिले भेट भयो भन्ने सम्झना नै नहुने क्या !
उहाँ कहिलेकाहीँ न्यूरोडमा पान खान जानुहुन्थ्यो । हामीलाई पनि खुवाउनुहुथ्यो । मलाई निकै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले एकपटक भारतका साहित्यकारको निम्तामा नयाँ लेखकको रूपमा भारत जाने मौका पनि पाएको थिएँ ।
उहाँ हामीभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो । तर पनि धेरै कुरा ‘शेयर’ हुन्थे । उहाँलाई एकपटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिएन । त्यसबेला अफसोस पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा कविता पनि लेख्नुभयो । त्यो कविताको रचनागर्भ र सन्दर्भ सुनाउनुभएको थियो । त्यस्तै चर्चित कथा ‘त्यो फेरि फर्केला’लगायत अन्यको पनि रचना गर्भ सुनाउनु भएको छ ।
उहाँ निकै विद्धान हुनुहुन्थ्यो । मैले सुनेअनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाम नै उहाँले राखेको हो । तर हो कि होइन भन्ने यकिन प्रमाणचाहिँ छैन ।
उहाँ अलि रसिक पनि हुनुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ रोमान्टिक कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको कुरा गर्ने शैली पनि रमाइलो थियो ।
हामी घनिष्ठ त थियौं नै, तर दुःखसुख बाड्ने गरी चाहिँ होइन । म नयाँ नयाँ लेखक थिएँ, के नै दुःख बाड्न सकिन्थ्यो र ?
उहाँचाहिँ ‘रिजर्भ’ खालको हुनुहुन्थ्यो । निकै भलादमी प्रकृतिको । हामीलाई निकै महान कथाकार भन्ने लाग्थ्यो । म उहाँको घरमा गएको छु ।
उहाँ पृथ्वी पुरस्कार पाउदा निकै खुशी हुनुभएको थियो । त्यसैबेला मैले उहाँको डकुमेन्ट्री खिचेको पनि थिएँ । त्यसबेला उहाँसँगै खाना खाइयो । डकुमेन्ट्रमा उहाँले खाना खाएको, हिँडेको सबै खिचिएको थियो । तर त्यो कहाँ हरायो कहाँ ? ‘एडिट’ गरिएको पनि थिएन । अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
जसरी कथामा बिपीले रागात्मकता ल्याउनुभएको थियो, त्यसरी नै ‘पल्लो घरको झ्याल’मार्फत उपन्यासमा रागात्मकता भित्र्याउनुभएको मानिन्छ उहाँले ।
उहाँले उपन्यासको मिश्री पात्रबारे भन्नुभएको थियो । तर हामीले नचिनेको व्यक्ति भएको कारण त्यति यादचाहिँ भएन । उहाँ ‘रिजर्भ’ हुँदा–हुँदै पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार्दै पात्रबारे भन्नुभएको थियो ।
पछि मैले उहाँलाई महेन्द्र गुरुङले स्थापित गरेको पुरस्कार दिनलाई भूमिका खेल्ने मौका पाएँ । गुरुङ इन्जिनियर एसोसिएसनको अध्यक्ष र कवि पनि । उहाँले रमाकृष्ण प्रतिष्ठान बनाएर पुरस्कार स्थापना गर्नुभयो । पुरस्कार चयन कमिटिमा मलाई संयोजक बनाउनुभएको थियो । मैले उहालाई भनेँ, ‘यो पुरस्कार गोविन्द गोठालेलाई दिनुस् । उहाँ आदरणीय मान्छे पनि हो । अर्को वर्ष दिन पाइन्छ कि पाइँदैन ।’ उहाँले मान्नुभयो र पुरस्कार दिइयो । नभन्दै, त्यो गोठालेले पाएको अन्तिम पुरस्कार बन्यो । पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा म जान नपाए पनि उहाँ उपस्थित भएको अन्तिम कार्यक्रम बन्यो । आफूले स्थापना गरेको पुरस्कार उहाँलाई दिन पाएको र त्यो ऐतिहासिक बनेको कुरामा महेन्द्रजी पनि खुशी हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई म दाइ भन्थेँ । दाइ (ध.च. गोतामे)सँग बाक्लो संगत थियो तर मसँग त्यति बाक्लो थिएन । तर कहिलेकाहीँ दाइकहाँ बोलाएको बेला सँगै ‘ड्रिंक’ गरेको सम्झना छ ।
एकपटक उहाँले मसँग फोटो खिचाउनुभएको थियो । त्यो फोटोको बारेमा मैले लेखेको पनि छु । उहाँले त्यसको शिर्षक ‘पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट’ राख्नुपर्छ भनेर भन्नु भएको थियो । मैले पनि त्यसबेला लेख्न सुरु गरिसकेकोले उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो । तर मैले उहाँलाई भनेँ, ‘होइन दाइ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट हुनुपर्छ ।’ दुर्भाग्य ! त्यो फोटो हरायो ।
पारिजातको ‘शिरिषको फूल’ले निकै चर्चा पायो । त्यसमा उहाँको भूमिकाको पनि निकै चर्चा भयो । त्यसको केही समयपछि मेरो ‘अन्त्यपछि’ उपन्यास रूपरेखामा पूरै छापियो । त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘पारिजातको शिरीषको फूलचाहिँ मोतीको माला हो । तपाईंको उपन्यास चाहिँ छरिएको मोती हो ।’ मैले ठट्टा गर्दै भनेँ, ‘जे भए पनि मोती त हो नि है दाइ ।’
उहाँले म भएको भए यस्तो लेख्थेँ पनि भन्नुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई भन्थेँ, ‘के गर्नु दाइ, यो आइडिया मलाई आयो । कसैको चिउँडो बांगो छ भनेर के गर्नु ? त्यसलाई बांगोसहित नै स्वीकार्नुपर्छ पर्छ नि, हैन दाइ ?’
उहाँ असाध्यै पढ्नुहुन्थ्यो । अरूलाई किताब पनि दिनुहुन्थ्यो । उहाँको पुस्तक संकलन राम्रो थियो ।
म काठमाडौँ आउँदा भूपीको चर्चित कविता ‘हामी’ प्रकाशित भइसकेको थियो । त्यो कविता पछि पञ्चायतकालमा लेखिएको हो, तर उत्तम कुँवरले चलाखीपूर्वक अगाडिको मिति हालेर छापेको भनिन्छ । त्यो कविताको मलाई प्रभाव परेको थियो । त्यसैले भूपी कहाँ बस्छन् भन्दै खोजेर पनि हिँडियो । त्यसरी खोजेर त भेटिएन ।
तर जब भेट भयो, निकै निकट भयौँ । हुँदा–हुँदा हामी ‘तिमी’ सम्बोधनमा आयौँ ।
धेरैपटक सँगै बसेर ‘ड्रिंक’ पनि गरियो । त्यसबेलाको एउटा घटना सम्झन्छ्ु । शेर पञ्जाब भन्ने रेष्टुरेन्ट थियो खिचापोखरीमा । त्यहाँ डिं«क गर्न बसियो । मलाई एउटा विवाहमा जानु थियो । तर धेरै पिइयो । म पनि विवाहमा जान सकिनँ । भूपी पनि हिंड्नै नसक्ने हुनुभयो । होटलको किचनमा नै सुतियो ।
उनले खाएको बेलामा होटलको मालिकलाई आफूले लगाइराखेको महँगो घडी नै उपहार दिनुभयो । उनले भोलिपल्ट उठेर ‘घडी खोई ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले भनें, ‘तिमीले त उपहार दियौ नि होटेलमालिकलाई ।’ त्यसपछि उहाँ जिल्ल परेर ‘माग्न सकिँदैन ?’ भन्न थाल्नुभयो । मैले भनेँ, ‘माग्न त तिमीले नै माग्नुपर्छ । तिमीले दिएको कुरा मैले मागेर हुन्न ।’ आखिर लाजले त्यो घडी मागिएन । त्यस्तो पनि भएको छ ।
भूपीसँगका यस्ता धेरै घटना छन् । मलाई ड्रिंक गर्दा शान्त हुने मान्छे नै मन पर्छ । अहिलेसम्म पिएर झगडा गरेको छैन । भूपी पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो । रमाइला गफ गर्नुहुन्थ्यो । पिएपछि अझै खुल्नुहुन्थ्यो । व्यक्तिगत जीवनका रोमान्टिक गफ पनि गर्नुहुन्थ्यो ।
उहाँसँगका धेरै सम्झना छन् । सबैजसो मैले मिडियामा लेखिसकेको छु । ‘नेपाल’ मा एउटा अन्तिम लेख लेखें । त्यसमा भनेको छु, ‘भूपीबारे यो अन्तिम लेख हो । यो पछि लेख्ने कुरा छैन । कि नलेख्ने कुरा बाँकी छन् ।’
अब लेख्न नमिल्ने कुरा त भन्न मिल्दैन नि । चाहे त्यो पोलिटिकल होस् चाहे रोमान्टिक ।
Tagsगोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले ध्रुवचन्द्र गौतम नेपाली साहित्य बदरीनाथ भट्टराई बालकृष्ण सम भवानी भिक्षु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शंकर लामिछाने
Laxmi nath gyawali Sumeru says:
पढ्दा मजा लाग्यो। भैरहवा,तौलिहवा,डिल्लीबजार को याद साझा कथा ,SLCमा पढेक‍ो बदरी भट्टराई ले भाईलाई लेखेको चिठी,समकाेे नियमित अास्मिकता देवकोटा को के कुरा गरौ। यस्तैमष्तिस्क भित्रको रिल खुल्दै गयो ।पढ्दा पढ्दै सकिएछ पत्तै भएन।